Oduu Ammee!! Yeroo ammaa kana manni Gaazexeessitoota Raadiyoo Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) fi qondaala ABO #Lammii_Beenyaa Poolisii federaalaatiin marfamee sakatta’amaa jira – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Ammee!! Yeroo ammaa kana manni Gaazexeessitoota Raadiyoo Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) fi qondaala ABO #Lammii_Beenyaa Poolisii federaalaatiin marfamee sakatta’amaa jira
Oduu Ammee!! Yeroo ammaa kana manni Gaazexeessitoota Raadiyoo Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) fi qondaala ABO #Lammii_Beenyaa Poolisii federaalaatiin marfamee sakatta’amaa jira
Oduu Ammee!! Yeroo ammaa kana manni Gaazexeessitoota Raadiyoo Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) fi qondaala ABO Lammii_Beenyaa Poolisii federaalaatiin marfamee sakatta’amaa jira
Yeroo ammaa kana manni Gaazexeessitoota Raadiyoo Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) fi qondaala ABO #Lammii_Beenyaa Poolisii federaalaatiin marfamee sakatta’amaa jira
Mootummaan mana jireenyaa Miseensota ABO halkan dahoo godhachuun eeyyama mana murtii malee fi bakka taajjabbiin hin jirretti sakatta’umsa gaggeessaa jiru.
Miseensonni ABO hunduu karaa seeraan miseensummaan isaanii mirkanaayee osoo jiruu qaama waraanaa mootummaan halkan kana marroo lammaffaaf kan sakkata’amaa jiran.
Torban tokko dura mana jireenyaa Hoggantoota Olaanoo ABO shan haaluma nama gaddisiisuun halkan guutuu itti marsanii buluun ganama itti cabsanii sakatta’uun ni yaadatama.
Guyyaa har’aa Bitootessa 14/2020 mana jireenyaa miseensotaa fi galaalchessitoota SBO fi ONN dabalatee Qondaala ABO jaal Lammii Beenyaa akkasumas Qondaalli ABO jaal Biiftuun kan keessatti argamu humni waraanaa weerara gaggeessen sakatta’umsa guddaa godhanii jiru.
Oduuma wal fakkaatuun Dargaggoo Gumii suurichoo jedhamu humna waraanaan galgala kana ukkaamsamee bakka itti hidhame hin beekamu.
Jaal Abdii Raggaasaa Wiixata dhufu gaafa Bitootessa 16 mana murtii magaalaa Buraayyuutti dhihaata. Ummanni keenya achitti argamuun dhaddacha isaa akka hordoftan yaadachiisna.
Bilxiginnaa Tola erga didde du’a hin diddu jadha gareen Abbaa Teestaa!!
Gareen Soonsa Abbaan Torbee Magaalaa gudditti Oromiyaa Finfinnee Galeera!!
Guyyaa boruu irraa eegalee guutummaa Finfinnee keessatti warra Biyya fixe, warra dhiiga Oromoo dhugaa jiru, gantuuf hattuu Maqaa Hayyoota xureessa jirtu irratti, warra garaaf Qabsoo ummata Oromoo irratti Xibaaraa jiru irratti Tarkaanfii fudhachuu ni eegale!! gumaa baasuun itti fufa!!
Abbaan Torbee Tarkaanfii Eenyu irraa haa eegaluu? Yaada kennadhaa?
Via: Shukuradin Jamal
“Jidduu Keenyatti Daaqon Daani’eel Kibrati argama.Daani’eel bakka kanatti argamuu keenya hedduun itti gammada naan jedhe.Maalif jennaan tokkummaan Muslimoota hedduu nagammachiisa naan jedhe.”Abiyyi Ahmad
Soba guddaa hangana gahu ifa galaa namuu beekuu kana namni sobe kan namni hin beeknee hoo hangam takka soba jedhani tilmaamuun salphaadha.Nama biyya bulchurraa kijiba guddaa kana dhaga’uu caalaa wanti nama qaanessuu hin jiru.
Mee maal jettani namicha kanaan fayyaa qaba moo fayyaa hin qabu jettan.?Wanta hin jirre tokko dhugaa fakkeessee waan hunda akkanumatti soba.Nama qalee dhadhaa dibe nama jedhuu bar namichi kun.Amma waa’ee Daaqoon hundi keenyaa waan beeknu kana keessatti gaaromina isaa nuuf ibsuu yaalun nugowwomsuun Abiyyi maal akka ta’ee warri rafee f addaan isiniif baha jedhen yaada.
Dubbiin Abiyyi dubbatu takka dhugaa hin qabdu.
1 Dureeyyiin biyya keenya hedduun isaanii qaxxaamuraan sooroman malee barumsa hin qaban hedduminaan waggootan 30 darban
2 Har’a kan PP qarshii gumaache warra qaxxaamuraan duroomaa turan, ammas karaa qaxxaamuraan itti fufuu barbaadani
3 Haasaan kun isaan gammachiisuuf ykn haamilee isaanii eeguuf waan taasifame jetteetu of sobda
Ummata miliyoona 14.3 oliitu dukkana keessa nu irraa jira! Addunyaatti iyyachuufin amma…Restore communication now!!! #COVID19
Daani’eel Kibrati tokkummaan Muslimoota hedduu nagammachiisa naan jedhe.”Abiyyi Ahmad